Atụmatụ ego maka ndị ọchụnta ego ọhụrụ | e-azụmahịa ozi
Ndụmọdụ gbasara ego maka ndị ọchụnta ego ọhụrụ
Encarni Arcoya | 13/04/2022 10:24 | StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Ime mkpebi ime abụghị ihe dị mfe, karịsịa n'ihi na ị na-ekpughe onwe gị site n'itinye akụkụ nke isi obodo gị n'ihe ize ndụ n'amaghị n'ezie ma ọ ga-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ị họrọla ezi echiche ma ọ ga-aga nke ọma. Yabụ, Ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-ewepụta onwe ha na-achọ ego: kredit, mgbazinye ego, na-eme ka ị nweta ihe...
Anyị chọrọ ibinye gị aka na, n'ihi nke a, taa, anyị chọrọ ịgwa gị banyere ndị ahụ Atụmatụ ego na usoro nwere ike ịbata ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọchụnta ego ọhụrụ bụ ndị kpebiri na ha ga-agba ọsọ ma mepụta azụmahịa nke gị. Kedu ihe kpatara na ị gaghị eji ụfọdụ uru agbakwunyere mee ya?
1 Usoro ego iji mee nke ọma karịa
1.1 Buru n'uche isi mmalite nke ego ndị dị
1.2 si n'obere gaa n'ọzọ
1.3 Wulite ego mberede
1.4 Na-enwe ezigbo atụmatụ ego mgbe niile
Usoro ego iji mee nke ọma karịa
Obi abụọ adịghị ya na ịzụ ahịa bụ ihe ize ndụ. Ị nwere ike inwe echiche kachasị mma n'ụwa ma amaghị kpọmkwem ma ọ ga-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ndị ahịa ga-ama gị, zụta, kwadoro na ịzụta ọzọ. Nke a na-agụnyekwa itinye ọtụtụ ihe n'ihe ize ndụ. Ọ bụ ya mere otu n'ime nnukwu ihe mgbochi mgbe ịmalite azụmahịa bụ ego, ya bụ, inwe ego dị mkpa iji gboo mmefu niile, ụdị dị iche iche, nke dị na azụmahịa.
Otu n'ime ndụmọdụ mbụ a na-enye onye ọchụnta ego ọhụrụ ọ bụla bụ inwe buru n'uche ohere niile enwere iji kwado oru ngo n'ihi na, ọtụtụ oge, "ihe enyemaka" ndị a nwere ike ịbụ ihe mkpali dị mkpa maka azụmahịa iji gaa nke ọma. Ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ka ọ jide ya wee gaa n'ihu.
Ị chọrọ ndụmọdụ ndị ọzọ? Tinye uche.
Buru n'uche isi mmalite nke ego ndị dị
Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị na-ele anya n’ihi na ha chere na ha erughị eru, na a ga-eweghachi ha, ma ọ bụ na e nyeghị ha nanị onye ọ bụla. Ma ọ bụ n'ezie ihie ụzọ iche echiche otú ahụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị gwaghị onwe gị banyere ha mbụ. Ị na-ahụ, na Spain enweghị ọtụtụ ụdị, ma opekata mpe, anyị nwere ụfọdụ. Ndị a bụ:
Ego nke onwe. Ya bụ, isi obodo ị nwere ike ịmalite azụmahịa. Nke a bụ ihe dị mfe n'ihi na ọ ga-adabere na ego ị nwere na ego ị nwere ike ịnye iji malite ụlọ ọrụ gị.
Ego ego nke fs atọ. Kpọmkwem: ezinụlọ, ndị enyi na "ndị nzuzu" (ezinụlọ, enyi na ndị nzuzu). Ọ na-agụnye iji ego na ezinụlọ gị, ndị enyi gị ma ọ bụ ndị kwere na gị na-enye gị maka ụlọ ọrụ gị n'ụzọ ị ga-esi nwetakwu ego. Ntinye aka gị nwere ike dabere na mgbazinye ego, onyinye ma ọ bụ òkè na ụlọ ọrụ.
Ịgbakọta ego na igwe mmadụ. Kpachara anya, n'ihi na ha abụọ abụghị otu. Crowdfunding bụ nyiwe ndị na-enye nkwado. Mgbe ìgwè mmadụ na-ezo aka na ndị na-enye ego na ọmụrụ nwa (ụdị mbinye ego na onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ).
Enyemaka. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị a kacha mara amara, mana ọtụtụ oge ị ga-agụrịrị obere ebipụta nke ọma iji mara ma ị nwere mmasị ma ọ bụ na ị chọghị. Ọtụtụ oge, ọ pụtaghị inwe ego iji malite azụmahịa gị, kama na ị ga-enwerịrị ụzọ ndị ọzọ isi nweta ego. Ma ọ bụ na onyinye ndị a mgbe ụfọdụ na-ewe ogologo oge ịmalite na ndị ọzọ na-achọ ka ụlọ ọrụ ahụ amalitelarị ma na-arụ ọrụ.
Ego mgbazinye. Ma ụlọ akụ na ndị na-ekere òkè, ya bụ, ndị a na-eme n'ọnọdụ maka inwe òkè na ụlọ ọrụ.
Asọmpi maka ndị ọchụnta ego. Ọ bụrụ na ị maghị, na Spain, a na-enwekarị ihe nrite na asọmpi nke ebumnuche ha bụ ịtụle ọrụ azụmahịa. Ego a na-enweta na ndị a na-abụkarị ihe na-atọ ụtọ ma mgbe ụfọdụ ọ na-ezuru iji mee elu.
Ahịrị maka ndị ọchụnta ego. Ndị a sitere na ụlọ akụ na ICO na-elekwasị anya na ndị ọchụnta ego iji nye ha ego. Nke ahụ ee, iji nweta ya ọ dị mkpa ka ewepụtara nkwado na nkwa.
Ndị mmụọ ozi azụmahịa. Ha bụ ndị na-ekpebi itinye ego na ọrụ azụmahịa, ya bụ, na ọrụ nke ndị ọchụnta ego ọhụrụ. Na nloghachi, ọ bụghị naanị na ha na-enweta uru akụ na ụba, mana ha nwekwara ike ịdị ka "ndị nkuzi" ma tinye aka n'ịhụ na ihe niile na-aga n'ihu.
Ego ego. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ewe ndị ọrụ ma ọ bụ na oke nke onye ọrụ onwe ya. Ọ bụ ụzọ ị ga-esi nweta mbelata ma ọ bụ ọrụ dị ọnụ ala karịa maka mbelata ndị ahụ na ụgwọ.
N'ezie, enwere ọtụtụ ụzọ isi nweta ego na ndụmọdụ anyị bụ iburu ha n'uche n'ihi na ha nwere ike nyere aka oru ngo gi inwe ọwa inye ego nke ahụ na-enye gị ohere ijikwa onwe gị na ọbụna gaa n'ihu.
si n'obere gaa n'ọzọ
Mgbe anyị nwere ọrụ azụmahịa n'uche, ọ na-adịkarị ka anyị na-eche nnukwu echiche. Ma nke a bụ n'ezie ndudue kasịnụ ị nwere ike ime. Ma ọ bụ n'ihi na ọ nweghị ọrụ nwere ike ịga n'ihu wee ghọọ ihe "nnukwu" mgbe ị na-enweghị ụzọ dị mkpa: ego, ọrụ, nkwukọrịta, mgbasa ozi ...
Ọ bụ ya mere, Mgbe ịmalitere dị ka onye ọchụnta ego, ị ga-agarịrị nke nta nke nta, N'ịmara na afọ mbụ bụ ihe mgbagwoju anya na nke siri ike, ma ozugbo ị nwetara ha ịhụ gị, ihe niile ga-aka mma.
Wulite ego mberede
Ihe dị ole na ole ndị ọchụnta ego na-eme bụ inwe a ego mberede. Ya bụ, ego a na-echekwa maka imeri nsogbu ụfọdụ na-abịa na mberede. Dịka ọmụmaatụ, na n'ime ụlọ ahịa ha anaghị ejere gị ozi n'ebughị ụzọ kwụọ ụgwọ ya; na-ezu ohi na inwe ịgbanwe windo ụlọ ahịa gị, wdg.
Nke a, nke dị ka ihe nzuzu, abụghị n'ezie, n'ihi na n'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe ihe nkwado mgbe nile iji nagide ihe omume ndị ahụ a na-atụghị anya ya na-emebighị ihe nke mmefu na ego ị nwere n'ọnwa ahụ.
Na-enwe ezigbo atụmatụ ego mgbe niile
Ọ nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike na nke na-agwụ ike, ma n'eziokwu ọ dị ezigbo mkpa, na ọ bụ n'ihi na otú a ka ị ga-esi hụ na ihe niile data na-ekweta na enweghị nsogbu ndekọ ego ma ọ bụ ego efu na ụlọ ọrụ.
Site na ịchịkwa ma mmefu na ego, ị ga-enweta mara ka ị na-ejikwa ego ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịchekwa ihe ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ndị a nwere ike ịdị ka ndụmọdụ ndị bụ isi na onye ọ bụla ga-eme ya, nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị ọchụnta ego ọhụrụ na-amaba "n'ime ọdọ mmiri" n'ebughị ndụmọdụ ndị a n'uche. Ma mgbe ụfọdụ, ọ bụ nnukwu ndudue.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Ndụmọdụ gbasara ego maka ndị ọchụnta ego ọhụrụ
Otu esi emepụta amụma nloghachi na eCommerce gị